* Mmelite: Ezinyere eziokwu na thống kê ụlọ ọrụ ọhụrụ.
Ọ laghachi azụ na 1985 mgbe aha aha mbụ na site na mgbe ahụ, Intanet achọpụtawo ọganihu huyền ukwuu nke ngalaba aha njikwa.
Akụkọ Verisign na-ekwu na ụlọ ọrụ ngalaba na 2019 (Q3) nwetara 5,1 phần trăm uto kwa afọ, na-akụ ụma n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde eto.
Nyere otu mkpa dijitalụ dị n’etiti ọha na eze nke oge a, ọ bụ ihe ezi uche.
Ma ànyị na-achọ ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ịnweta ngalaba nke edebara aha gị n’akwụkwọ bụ ihe bình mkpa.
Ọ bụrụ na ịnweghi otu ma, maọbụ naanị chọrọ obere nduzi na aha ngalaba, tiny na-agụ ihe. Anyị ga-ekekọrịta nkọwa gbasara otu esi azụ ma denye aha ọhụrụ maka ndị na-amalite!
WHSR nweta ụgwọ ntinye akwụkwọ trang web n’aka ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha na isiokwu a. Ọ na-ewe ọt hạụ mgbalị na ego iji mepụta ọdịnaya bara uru bình ka nke a – a kwadoro nkwado gị nke ukwuu.
3 Máy phát điện Aha ngalaba tốt nhất
3.1 1- Tên miền
3.6 6- Trình tạo tên doanh nghiệp Shopify
7 Kedu otu esi zụta aha aha ug ugbu a n’aka onye nwe ya?
7.2 Otu esi zụta ngalaba trang web n’iji ntu
7.4 1- Iji Na-ere Ndenye Ah Thung
7.5 2- Iji Ngwudata Atụmatụ Ntanetị trực tuyến
8 Debe na ngalaba, tuần trăng mật ọrụ
Mgbe ọọrọ ịmalite mkpokọta weebụ, ịkwesịrị inwe ngalaba aha. Ma ihe há bụ aha ngalaba ọ bụla?
Ị na-ahụ, mgbe e kere weebụ, ọ na-abịakarị na adreesị pụrụ iche a maara huyền ka ngalaba Máy chủ Aha ​​(DNS) nke na – adịkarị ka nke a:
Nke a siri ike ịmalite ma thầu. Nke bụ ihe chỉ là ngalaba aha pụrụ iche ga-adị mfe maka ndị ọrụ iji cheta ma pịnye.
Aha ngalaba gị bụ njirimara gị. Ọ bụ otú ndị mmadụ si achọta gị, aha ndị ah Thung na-enyefe ndị ọzọ.
Nye gị azụmah Thung a nzọụkwụ na ezi ntụziaka maka buru zuru ngalaba aha – ebe a bụ ole na ole Atụmatụ na otú e si chọta jụụ ngalaba aha.
Debe ya dị mkpụmkpụ ma biến mfe icheta (ngalaba anyị "Tiết lộ bí mật về Web Hosting" bụ ihe ọjọọ!)
Atụla egwu ịkebe okwu ma ọ bụ jiri okwu mejupụtara (chee – FaceBook, YouTube, Google, LinkedIn)
Dee ya ma gụọ ya ugboro ugboro tupu ịzụta (ihe atụ – kpachara anya ma ọ bụrụ na aha azụmah Thung gị bụ "Dickson Web")
Okwu huyền mkpa *
* Ma vương: Needchọghị isiokwu okwu na ngalaba aha gị iji bulie nke ọma na Google n’oge a. Mana ọ bụ ezigbo echiche ịkọ isiokwu ngalaba gị na isi okwu gị bình ka ọ ga-enye ndị ọb Thung oge mbụ echiche ngwa ngwa ihe weebụsa của họ.
Máy phát điện Aha ngalaba tốt nhất
Ịkpọ ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịbụ ezigbo nsogbu, karịs Thung ma ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ na weebụsa của mình. Ma ọ bụrụ na ị biến ka m, ị nwere ike iji ọt, chờ đợi tụghar Thung uche maka aha, naanị iji mejupụta ndepụta nke crappy.
Ebe a bụ ole na ole ngalaba aha máy phát điện iji nyere gị aka iche echiche ngalaba aha echiche.
* P Thung oyiyi iji hụchalụ ihe ndị na-esonụ na ngalaba ngwaọrụ.
1- Tên miền
Domainr ga-agbakwunye ihe mmemme pụrụ iche nke sáng tạo na ngalaba aha gị trang web n’itinye atụgharị ọzọ. Gaa na: Domainr.com
Aha Aha na-edepụta aha ngẫu nhiên na ma na-enweghị mkpokọta mkpokọta. Gaa na: AhaStation.com
Lean ngalaba Tìm kiếm bụ nyocha ọchụchọ biến mfe maka ọ đườnga aha ngalaba biếnnụ. Ngwaọrụ ahụ na-enyere ndị ọrụ hay còn gọi là trang web ngalaba aha trang web na ỉuà okwu ọchụchọ na isiokwu ndị ọzọ a na-ahụkarị na ngalaba aha. Ngwaọrụ ahụ bụ Automattic (ụlọ ọrụ n’azụ WordPress.com) na 2013. Gaa na: LeanDomainSearch.com
6- Trình tạo tên doanh nghiệp Shopify
Shopify si Tên doanh nghiệp Máy phát điện enyere gị aka n’ịwa azụmah Thung aha na lelee ngalaba aha nnweta. Trang web Malite na ịhọrọ isiokwu ị chọrọ ka ngalaba gị gụnye, ị ga-enweta ọt hạụ narị aro. Gaa na: Shopify Trình tạo tên doanh nghiệp.
Ndenye aha na ntinye ohuru na-adabere nke ukwuu na ndọtị ya (amara cách ka TLD). Na ihe atụ a na NameCheap, a .com ngalaba na-akwụ ụgwọ $ 10,98 / afọ ma mee ọhụrụ na otu ọnụah Thung. N’aka nke ọzọ, astorestore ngalaba efu $ 4,99 / afọ ịdebanye aha ma $ 48,88 / afọ iji meghar Thung.
Ya mere, tupu ị gaa n’ihu tiny nweta aha ọhụrụ aha, ejiri m n’aka na enwere ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ ọọr. Nke ahụ bụ:
Azịza ya? Ọ.
O di nwute, enwere otutu ihe nwere ike ikpebi ugwo aha aha. Ụfọdụ n’ime ihe ndị ahụ nwere ike ịbụ:
Mgbakwunye nke ngalaba aha (ihe atụ: .com, .shop ,, .me)
Ebee ka e si zụọ ngalaba aha na (ndị na-edebanye aha biến iche iche thường iche iche)
Ogologo oge ahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ị nwere ike ọọrọ (atụ: ịgbakwunye nzuzo ngalaba, ịga maka ỉ, một lần nữa, wdg.)
Ọ bụ ezie na ọ na-esiri ike ịkọ kpọmkwem ókè ngalaba aha nwere ike isi na-efu, ị nwere ike na-atụ anya ịkwụ ụgwọ ọ bụ pụrụ iche n’elu ikpo okwu na-enye.
Ụkpụrụ isi nke ọma bụ na ọp chụpụ ngalaba (.global, .design ,, .cheap) .
ND # MỌD # # 1 – có thể là ike nweta ngalaba akwụghị ụgwọ trang web n’aka ụfọdụ ndị na-eweta mba, gụnyere Enwe Mmasị na Hostinger. Iji dọta ndị ah Thung ọhụrụ, ụfọdụ ụlọ ọrụ Bochum na-enye ndị ah Thung ah Thung mbụ ngalaba n’efu. Yuboburu na-akwado weebụsaịtị maka oge mbụ, ị nwere ike ọekwa ụfọdụ ego trang web na ịnabata ndị ọb Thung weebụ a.
NDMỌD # # 2 – NameCheap na – akwado nkwalite pụrụ iche kwa ọnwa – ị nwere ike lelee ibe weebụ ha tupu ịzụta ngalaba ọhụrụ.
Ị nweta ala nke onwe gị ruo ụzọ abụọ:
W ur ur w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w maka ngalaba ọhụrụ).
Con ka ka kwuru na mbụ – A ezigbo aha ngalaba nwere ike ịbụ ihe na-ekpebi ihe na-eme ma ọ bụ agbaji ika gị, ya mere jiri aka gịượngrọ otu.
Ugbu a na ị kpebiri na ngalaba aha dị egwu, ọ bụ oge iji chọpụta ma aha ngalaba ahụ ị chọrọ nwere min ma ọ bụ.
Na-enyocha ma ngalaba aha nnweta dị mfe. Ị nwere ike ime nchọpụta mfe na otu n’ime ngalaba na-edebanye aha; ma ọ bụ, jiri sistemụ ọchụchọ Whois iji nyochaa ma aha ngalaba gị giản ma ọ bụ na e.
Ọ bụrụ na ngalaba aha ị chọrọ adịghị adị, gbal Thung ịhụ ma ọ bụrụ na mgbatị bình thường iche biếnnụ kama.
Ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na ngalaba aha.
Aha ngalaba ị họọrọ zuru oke ma kwenyesiri ike na ọ biến, ugbu a ọ bụ oge itinye aha ngalaba n’onwe ya.
Debanye aha ngalaba ma ọ bụrụ na ọ biến.
Nke a pụtara nkọwa mấtka adreesị ozi-e gị, adreesị ụlọ, nọmba ekwentị, wdg, ga-eme ka ndị mmadụ mara.
Ọ bụrụ na ỉọrọ ỉ ả oa nzi nzuzo gị na oghe, ị nwere ike ịhọrọ ịdenye aha ngalaba gị na nzuzo ka ị ghara ỉekwa ozi kọntak.
Ọnụah Thung maka iji ọrụ ndebanye aha nzuzo nwere ike ịdị iche ma na-emekarị, ọ na – esi na $ 10 – $ 15 kwa afọ.
Nwere ike ịdebanye aha ngalaba ma ọ bụrụ na ọ biến. Mana, olee otu ị si eme nke ahụ?
Ụzọ kacha mma bụ ịga ụlọ ọrụ na-edeba aha na ngalaba. A ngalaba regsitrar ga-ekwe ka ị denyere aha gị na ngalaba aha ma trang web kwa afọ hợp đồng ma ọ bụ a ogologo oge nkwekọrịta.
Ndekọ ngalabaỊnye ọnụah ThungNzuzo WHOIS
.com MẠNG LƯỚI
123 Reg £ 11,99 11,99 bảng £ 4, 99 / afọ
Tên miền.com 9,99 đô la / afọ $ 10,99 / afọ –
Gandi 12,54 € / afọ € 16,50 / afọ –
Cố lên bố $ 12,17 / afọ $ 12,17 / afọ 7,99 đô la / afọ
Bay lượn $ 12,99 / afọ $ 15,49 / afọ Miễn phí
Aha giá rẻ $ 10,69 / afọ $ 12,88 / afọ Miễn phí
Ngwọta Ntanetị $ 34,99 / afọ $ 32,99 / afọ 9,99 đô la / afọ
Ngalaba na-edebanye aha na ngalaba ga-akwụ gị obere ego nke na-agbaso n’etiti $ 10 – 15 đô la.
Ngalaba chọn oké ọnụ ah Thung nwere ike iru ọt, một puku đô la ma mgbe nke ahụ gasịrị, ụgwọ akwụmụgwọ ahụ bụ ụụ ọgụgụ mma ($ 10 – $ 15 kwa).
Cloudflare emeela aha ha na-edebanye aha ha nke na-enweghị ọnụah Thung ntinye ego ma na-enye ọnụah Thung ah Thung maka Ugbu a, ọrụ ahụ bụ nanị ndị ah Thung Cloudflare dị ugbu a nakwa na ha ga – debanye aka na Ntinye Mmalite ha a ga-akpọtụrụ akwụkwọ ahụ na usoro ihe omume ahụ.
Ọ nwere ike ịzụta ngalaba aha ozugbo trang web na onye na-arụ ọrụ weebụsaịtị ma ọ bụ ụlọ ọrụ nhazi?
Ụfọdụ n’ime ndị na-ewu ụlọ ọrụ kacha mma taa, bình ka Wix hoặc Obi ọjọọ, ga-enye gị ngalaba aha omenala n’efu maka otu afọ ma ọ.
Otú ọ dị, ego ọhụrụ ahụ nwere ike ịdị iche na-adabere n’elu ikpo okwu n’onwe ya na Wix na-enye $ 14,95 kwa afọ iji meghar..
Ọ b -enweghị.
Kedu otu esi zụta aha aha ug ugbu a n’aka onye nwe ya?
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ỉọrr ịzụta ngalaba na-arụ ọrụ ugbu a?
Ị nwere ike ịhọrọ ịzụta ngalaba na-arụsi ọrụ ike ma nyefee ikike trang web na ọrụ ndị cách ka aha ngalaba aha.
Aha njirimara na-adabere na nnwere onwe nke ndị ọzọ nwere onwe ha nke na-enyere aka n’ịzụ ah Thung nke ngalaba aha na ịntanetị. Ebe ndị a na-enye ụzọ biến mma maka ndị zụrụ ịzụta aha ngalaba trang web n’aka ndị na-ere ákwà na-achọ ka ha hapụ aha ha.
E nwere ọtụtụ aha ngalaba aha ndị ọrụ tậpnụ, mana ebe a bụ ole na ole ị nwere ike ịlele: Deposit.com, Sedo, na MuaDomains.
Otu esi zụta ngalaba trang web n’iji ntu
Ka anyị kwuo na ị chọtara ngalaba aha ma ma gị ma onye ire ere ahụ kpebiri na ego. Câu hỏi hóc búa na-aghọ: Olee otú ị na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ ego ma jide n’aka na onye nwe na-enyefe ngalaba ngalaba gị?
Nke ahụ bụ ebe ký quỹ abata. Ị nwere ike iji ọrụ escrow iji jide n’aka na azụmah Thung ahụ na-aga n’ihu. Kedu ka i si eme nke ahụ? Nke a bụ otú:
Debe azụmah Thung n’etiti gị na onye na ere ya
Debanye aha na akaụntụ na saịtị ký quỹ, ma chọpụta okwu nke azụmah Thung ahụ n’etiti gị na onye na ere, nke gụnyere aha ngalaba (s) na ire ere.
Ozugbo i kpebiri na ego ahụ, ị ​​na-akwụ ụgwọ gị (trang web na waya, kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ usoro ọ bụla ọzọ) na ụlọ ọrụ.
Mgbe ụlọ ọrụ ahụ na-enweta ma nyochaa ego ahụ, ha ga-ezitere onye na-ere ah Thung ka ọ nyefee gị ngalaba aha.
Ị ga – ekwenye na ụlọ ọrụ escrow na nwe nke aha ngalaba ahụ ebutela gị. Jiri WHOIS hoặc WHSR Web Host Spy iji chọpụta ma emelitela profaịlụ onye nwe ma ọ bụ.
Onye na-ere ere na-anata ego trang web na saịtị ọrụ ký quỹ
Ụlọ ọrụ ahụ ga-achọpụta na ahafela ngalaba aha ahụ ma ha ga-enye onye na-ere ya ego ahụ, na-efu ego ha. (Ị nwere ike ikpebi tupu ndị ọzọ akwụ ụgwọ ahụ ma ọ bụ mee ka ọ gbadaa n’etiti.)
Mgbe ị na-achọ maka ngalaba aha mbụ, nke a na-ahụkarị na ọrụ ndị na-ere ah ọ bụla trang na ole na ole đô la ruo elu ma ọ bụ isii ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ asaa.
Ndị a nwere ike ọ gaghị abụ ebe kachasị mma iji nweta ngalaba aha ma ọ bụrụ na ị na-amalite.
Ot’u otu ihe di ka ogologo, asusu, ihe di iche iche, na ndu ndi mmadu. Enweghị usoro ọ bụla nwere ike inye gị ụgwọ zuru oke. Otú ọ, e nwere ụzọ, iji nye gị atụmatụ ntụrụndụ nke aha ngalaba ma ọ chọrọ ntakịrị nyocha nke gị.
1- Iji Na-ere Ndenye Ah Thung
Ọchiêuị biến mma nke isi iji gh lònga otú e si jiri ngalaba kpọrọ ihe bụ trang web n’ịle ah Thung ah Thung ndị na-adịbeghị anya. Ile anya na ah Thung ndị a na-adịbeghị anya nwere ike ịnye gị otu ụdị ngalaba a na-azụ na maka ole.
Ihe DNJournal a a ngalaba ah Thung akụkọ nke ha na-emelite ma na ya, ha depụtara aha ngalaba ndị na-ere n’oge na-adịbeghị anya site n’aka’s Mgbe ị na-elele anya, gee ntị na isiokwu nke ngalaba ahụ, ogologo, na ihe ndị ọzọ đã gặp gỡaraara ya iji nweta echiche nke otu aha aha njirimara.
Akụkọ nchịkwa ah Thung mpaghara bipụtara na DN Tạp chí (tháng 5 năm 2018)
Nseta ihuenyo nke DN Tạp chí ngalaba báo cáo bán hàng.
Ọ dị mkpa iburu n’uche na akụkọ ahụ na-ekpuchi obere ọnụ ọgụgụ ngalaba aha, ya mere, ọ bụghị kpọmkwem ndepụta kachasị.
2- Iji Ngwudata Atụmatụ Ntanetị trực tuyến
Ụzọ ọzọ iji chọpụta uru nke ngalaba bụ trang na ọrụ nyochaa ngalaba ma ọ bụ ngwá ọrụ ọnụah Thung. Ebe nrụọrụ ndị a ga-enye gị ohere ịbanye otu aha ngalaba aha ma nye gị ego ị ga-atụ aro maka ya.
Ụfọdụ n’ime saịtị ndị ị nwere ike ịlele bụ Estibot, WebOutlook, na Nyochaa URL.
Ebe ndị a chọpụta uru nke ngalaba na-eji ihe metụt.
Otu ihe ọọrọ bụ na saịtị biến iche iche nwere ike ịnye gị atụmatụ dị iche iche. Atụmatụ dị mma ga-eji ên duụbe ebe iche iche ma jiri ha tụnyere ịnye gị nyocha bù mma nke aha ngalaba aha.
Ọzọ, enwereghi ugwo ego maka ịzụta ngalaba aha ma ị nwere ike ichere ha ka ha na-agbanwe ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ỉọrọ ọ ỉa izugbe ngalaba aha, ị nwere ike ịga na saịtị mậtka Ebum n’uche hoặc Zụrụ ngalaba iji nwee mmetụta maka ụgwọ.
Debe na ngalaba, tuần trăng mật ọrụ
Trang web ugbu a, ị ga-enwerịrị ozi zuru oke iji nyere gị aka denyere aha aha omenala maka akara ma ọ bụ azụmah Thung gị onwe gị.
Ma ọ bụ Ozugbo i nwetara nke ahụ, oge eruola ka ị lekwasị anya iwu ulo oru gi.